Miyaan ku bilaabi karaa dhisidda isku-xirka wicitaanada si aan ugu soo gudbiyo bogga dambe ee qarsoodi ka hor wax kale?
Maalmahan, qodobada ugu muhiimsan ee raadinta Mashiinka Search-ka-baarka ah ayaa noqday mid aad u soo jiidasho badan marka loo eego hab kasta oo kale ee bogga SEO. Dhab ahaan, dhismaha xiriirinta tayada (oo ay ku jiraan ficillada looga baahan yahay in loo soo gudbiyo bogga gadaasha backlinks) waxay ku xiran yihiin bogga internetka, oo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah puzzle dhamaystiran oo ku saabsan qiimeynta mashiinka raadinta miisaanka. Waxay micnaheedu tahay in website kasta ama blog kasta waa inuu yeesho farsamo gadaal xooggan oo ku lug leh kobaca guud ee korjoogteynta awoodda sare, iyo sidoo kale himilada kama dambaysta ah ee lagu maamulayo SERPs Google. Dabcan, qaybta libaax ee istiraatiijiyadaha dhismaha xidhiidhka badanaa waxay u baahan yihiin wakhti badan, mararka qaarkoodna waxay u baahan karaan maalgelin lacag ah. Si kastaba ha ahaatee, heysashada xiriir xooggan ayaa ah mid haboon, oo waligeed bixin doona, gaar ahaan dhinaca aragtida mustaqbalka fog.
Wakaalada degdegga ah ee Dhismaha Xiriirkaaga
Sidaan horey u idhi, dhisida xiriir tayo oo tayo leh waa inaad ka mid noqotaa mudnaantaada sare. Dabcan, haddii aad go'aansatay in aad soo gudbiso boggaga dib u celinta ama xitaa marwalba wax walba ka soo baxa - waa kuu fiican! Laakiin taasi ma ahan mid ku filan oo ku riyaaqaya laad xur ah oo loo yaqaan 'profile backlink'. Miyaad isku dayday labadaba shirkadaha ganacsiga gaarka ah iyo ganacsiyada ganacsiga si ay u soo gudbiyaan bogga loogu talagalay dhabarka? Iyo haddii aad wali ka joogsanayso habka ugu horaysa ee aad isku daydid - halkan waa. Hoos waxaa ku qoran waxaan ku qori doonaa xeelado isku dhejisan oo isku xiran oo si dhakhso ah kuu keeni kara natiijooyin lagu cabbiri karo SEO.
Lataliyeyaasha Ganacsiga ee Degmada
Looma baahna in la sheego isticmaalka wicitaanada maxalliga ah si ay u soo gudbiyaan bogga loogu talagalay backlinks inay tahay sida ugu fiican ee loo bilaabo dhismaha dhabarka. Haddii aad la shaqeyneyso aasaasahan asaasiga ah ee ka bilowda muddada bilawga ah ee bilowga bogga internetka ama blog - waxaad horay u socotaa wadada saxda ah. Ha ka waaban inaad bixiso wakhti iyo dadaal si aad u hubiso inaad ku liisgarayso dhammaan wicitaanada waaweyn ee degaanka. Ku dar dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah, sida goobta ganacsigaaga, saacadaha shaqada, macluumaadka xiriirka, iwm. Habkaas, ma heli doontid oo keliya gadaal qiimo leh laakiin waxaad hagaajin kartaa aragtidaada internetka ee baarayaasha maxalliga ah, iyo sidoo kale hawlaha guud ee ganacsigaaga miisaanka. Noocyada Soogalinta Gaarka ah
Hada aan wajahno - Noocyada noocyadan ganacsiga ah ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan kuwo aan muuqaal lahayn, gaar ahaan marka la barbardhigo liisaska ganacsiga guud. Si kastaba ha ahaatee, wicitaanada warshadaha khaaska ah waa in aan marnaba la dayacin, maaddaama ay weli yihiin hab weyn oo lagu xoojin karo xiriiriyahaaga dhismaha marka aad boggaaga ama blogku aado. Xasuusnow, si kastaba ha ahaatee, soo gudbinta buug-yarahaan waxay qaadan doonaan wakhti yar, laakiin ha ka baqin. Inta badan, liistada noocaas ah waxay u baahan tahay inaad buuxiso nidaamka isdiiwaangelinta ka hor inta aadan ugu dambeyn soo gudbin bogga internetka ee backlinks - laakiin faa'iidooyinkaaga la saadaalinayo waa qiimo kasta oo lagu qaato halkaas, hubaal.
Raadinta fursadaha dhismaha xiriirka leh wicitaanada websaydhka, maanka ku hay in aad haysato dhammaan macluumaadkaaga ganacsiga si wanaagsan oo isku dheelitiran oo si buuxda loola wadaago macluumaadka ganacsiga ee ku taxan meelo kale Web. Haddii kale, waxaad la soo kulmi kartaa dhibaatooyinka qaarkood dhinaca dhinaca mashiinka raadinta ee waaweyn, iyo sidoo kale nidaam qiyaas ah. Ugu dambeyntii, si joogta ah u shaqee oo hubi inaad haysatid jeegar labalaab ah oo aad ku jirto meesha saxda ah iyo midda quseysa oo dhan kahor intaadan buuxin habraac kasta oo soo gudbinta si aad u hesho dib-u-heshiika Source .